WHD Series abahle Bead Mill
WSH Series High-viscosity nkqo Bead Mill
WSJ Series Horizontal Inter-okupholisa Function Full Bead Mill
WSK Series High-viscosity abahle okuzenza Bead Mill
WSV Series nkqo Inter-okupholisa Bipyramid Bead Mill
WSZ Series Inter-okupholisa ophezulu-viscosity Horizontal Bead Mill
Ezintathu roller Mill Series
Mqengqeleki DYS Series fracturing ezintathu waManzi
FYS Series fracturing Five roller Mill
SG / S Series ezintathu roller Mill
Metres / JRS Series ezintathu roller Mill
Abahle ngqo roller ezintathu million
Ilexicon Series fracturing roller Two Mill
S. / YSS Series fracturing ezintathu roller Mill
YSP / YSH Series fracturing ezintathu roller Mill
Viscosity High Umxhubi
LS / GJD Series Basket Ukusila Mill / Emulsifier
LXDLH Series yemihlaba Power Umxhubi
LXQLF Series Enhanced Multi-umsebenzi Triple Shaft Umxhubi
LXQLF Series Multi-umsebenzi Triple Shaft Umxhubi
LXXJB Series yemihlaba Umxhubi
Low Umxhubi viscosity
DSJ / SZJ Butterfly Umxhubi
Kwiintsali GFJ Series High-speed Machine
Yodongwe Double Roll Machine
Energy Saving Umshini sesitovu
LHX Series eyohlobo olulodwa emulsion Pump
Lab Isikali Bead Mill
Lab Scale roller ezintathu million
Nano line izinto imveliso lokugaya emanzi
Chocolate, peanut, Anut, imbewu camellia, umgca an imveliso gum
umgca imveliso zinambuzane / sokhula nokwaleka / kwikhemesti
umgca imveliso oluludaka Electronic
umgca imveliso oluzenzekelayo Gravure inki
umgca imveliso Ink Efficiency High
Inks viscosity High (kwesethi, UV offset, ushicilelo Okwenziwa) umgca imveliso
imveliso Food & Health
Sombala & Wedayi
Ink luhlobo intlama umxube zombala, arhente (resin oli), ongeziweyo ezifana diluent kunye nisikwe neparafini ulwelo yokubopha. Liprintwe kwi iintlobo ezahlukeneyo izinto ezifana ikhadibhodi, iphepha, ngefoyile ye metal, iplastiki, intsimbi, isikhumba ngokusebenzisa umatshini wokushicilela. Iimilo zezi zinto zeendawana kunokuba tyaba, zezindlu, njalo njalo ke ukwakhiwa i-inki ixhomekeke indlela yoshicilelo kwaye ebambekayo zeendawana.
Ngokutsho uhlobo plate yoshicilelo. Ink lungahlulwa-hlulwa zibe iintlobo-4:
inki yoshicilelo 1.Lithographic
Eli ligama jikelele inks ezahlukeneyo ezifanelekileyo yoshicilelo olulandelelanayo. Umphezulu we iselangeni ababangela indiza. Le ndawo yokulibiza oleophilic kunye indawo non-Ipateni esibamba. Ushicilelo kusekelwe kumgaqo ukuba i-oyile namanzi ukubuyiselana. Ngoko ke, i-inki olulandelelanayo kufuneka ukumelana amanzi. inki Common olulandelelanayo ink yoshicilelo kuquka ilingane inki yoshicilelo, isilungiseleli seglosi phezulu inki ukulinganisa, nentlaka emnandi ilingane i-inki, i-inki web-kondliwa-ukulinganisa, i-inki offset yemigca-ukutya, imibala emine INKQUBO ukulinganisa, ngokukhawuleza-iseti ilingane inki, lisisiqalo inki yinkonkxa-shicilelwayo, nzala ukumelana offset inki nebhekile-ushicilelo kunye inki yoshicilelo collotype.
Yeyona igama jikelele inks ezahlukeneyo ezisetyenziswa iindlela weempapasho. Oku ikakhulu kubandakanya inks ezisetyenziswa iincwadi, amaphephandaba, imifanekiso, iindleko, njl inkalo weempapasho inki kukuba i-inki inxalenye kwipleyiti ushicilelo elibukhali ukususela inxalenye ngaphandle inki. inki weempapasho Common kuquka weempapasho inki ukupapashwa, weempapasho umbala i-inki, rotary weempapasho inki ukupapashwa, rotary weempapasho iindaba inki, rotary weempapasho umbala iindaba inki, ipleyiti lobhedu inki yoshicilelo, weempapasho inki yoshicilelo iifilimu zeplastiki kunye inki yoshicilelo flexographic.
3.Gravure inki yoshicilelo
Yeyona igama jikelele inks ezahlukeneyo ezisetyenziswa iindlela zoshicilelo gravure. Xa ushicilela, indawo ipateni ingontsi ze kwipleyiti inki ngoko Ndolutshayela kude i-inki ukusuka kwindawo non-ipateni. It lungahlulwa-hlulwa ibe inki gravure oqingqiweyo inki gravure lokushicilela. Common gravure ink yoshicilelo kubandakanywa i-inki ukuphakheja ethambileyo, isigarethi ukurhangqa inki kunye inki yoshicilelo ibhokisi.
inki yoshicilelo 4.Mesh
Yeyona igama jikelele inks ezahlukeneyo ezisetyenziswa iindlela zoshicilelo wocingo kunye zazisetyenziswa kushicilelo nemiqhaphu, ushicilelo zeplastiki, ushicilelo metal, ushicilelo yodongwe, ushicilelo iglasi, ushicilelo imveliso elektroniki kunye noshicilelo leloto, njl mesh Common inki yoshicilelo kuquka iphepha screen inki yoshicilelo , i-inki yoshicilelo zeplastiki screen, isithambisi-screen inki yoshicilelo, iglasi screen inki yoshicilelo, yodongwe screen inki yoshicilelo, ngetshaneli inki ezinganyibiliki eguquguqukayo, njl
Changzhou Longxin ibiba abaninzi abadumileyo ukwenziwa inki basekhaya angaphandle kubandakanywa TOYO inki, DIC i-inki, DUBUIT Ink njalo njalo. umatshini wethu lithunyelwa United States, Brazil, India, eRashiya, eJapan, Korea, Singapore, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla, besonwabela udumo omkhulu kuzo zonke iinkalo zobomi. Longxin ungumnini yekhethelo uSekela Sihlalo Unit of Chinese Ink Association kwaye usoloko yinkokeli ezintsha kunye revolution kolu shishino. Ngapha koko, siya kuyila ndize ndiwakhe umgca imveliso lonke kunye umatshini olunye njengoko isicelo umthengi. Siya kunika arcade games nenkonzo kuwe.
Cebisa izixhobo imveliso ink: DS series abahle ngqo ezintathu lokusila mqengqeleki, S. series hydraulic ezintathu lokusila mqengqeleki, WSJ series tyaba zangaphakathi-okupholisa ngokupheleleyo umsebenzi bead okusila, WSD series ekhawulezayo flow isanti okusila, WSS series tyaba isanti okusila, WSK series High-viscosity abahle bead enemisebenzi lokusila
Line Product: line imveliso inki ukusebenza High, i-inki umgca imveliso oluzenzekelayo Gravure, High-viscosity inki (ukulinganisa, UV offset, ushicilelo isilika) umgca imveliso